ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ကျင်းပတဲ့ အခမ်းအနာ...
25 พ.ค. 2563 - 10:02 น.
(၁) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ကျင်းပတဲ့ အခမ်းအနားတစ်ခုကြောင့် ဝေဖန်မှုတချို့ ထွက်ပေါ်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ က မေ ၂၄ ရက် မနက်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ရှင်ဥပဂုတ္တမထေရ်မြတ် ဖောင်တော်ရေချပူဇော်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ ကိုဗစ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေကို ဖောက်ဖျက်ရာရောက်တယ်ဆိုပြီး ဝေဖန်မှုတချို့ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်တွင်းကူးစက်ခံရတဲ့ ပိုးတွေ့လူနာသစ်မတွေ့ရသူ ရှစ်ရက်ဆက်တိုက်ရှိလာပါပြီ။
မြန်မာမှာမေလ ၂၅ ရက်မနက်ထိ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးသူပေါင်း ၁၈၆၄၄ ၊ စောင့်ကြည့်လူနာ ၄၆၄၆၊ ပိုးတွေ့လူနာ ၂၀၁ ဦး၊ ရောဂါပိုးကင်းစင်သူ ၁၂၂ ဦးနဲ့ သေဆုံးသူ ၆ ဦးရှိထားပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ကျင်းပတဲ့ အခမ်းအနားတစ်ခုအပေါ် ဝေဖန်မှုတချို့ရှိ၊ ပြည်တွင်းမှာ ပိုးတွေ့လူနာသစ်မတွေ့တာ ရှစ်ရက် ဆက်တိုက်ရှိလာ၊ ဘရားဇီးကလာသူတွေကို အမေရိကန်က ပြည်ဝင်ခွင့် ကန့်သတ်